Shanghai Duxia Indasitiri uye Kutengesa
Firimu Ririkuputika Machine
Plastiki Bhegi Kugadzira Muchina
PP yakarukwa bhegi muchina
Ungasarudza sei yakakodzera PE yakapihwa firimu muchina / pe firimu ichivhuvhuta muchina?
Zvipfumbamwe zvakakosha zvekuita zvinodiwa zvepurasitiki firimu
Nyaya dzinoda kutariswa mune basa rekucheka muchina
Maitiro ekuita neye mapfumbamwe akaomesesa mavara pamushini wekudhinda?
Slitting Machine Kushanda Encyclopedia
filler masterbatch mufirimu yekuvhuvhuta maitiro
LDPE firimu yekuvhuvhuta maitiro ine mana makuru ekudzora mapoinzi
Kukura kwesainzi uye hunyanzvi hwekugadzira epurasitiki bhegi kugadzira muchina
Plastiki granulator / epurasitiki marara ekushandisa muchina zvinodiwa
Zvinetso zvakajairika zvepurasitiki bhegi kugadzira muchina
Musiyano uripo pakati pemuchina wekudhinda weflexo nemuchina wekudhinda
Mitauro 108 mukona yepamusoro yekurudyi
Ita ZVAKANAKA Zvekutakura Machina MuChina
Gadzira yepasi rose kirasi brand!
Shanghai Duxia Indasitiri uye Trade Co., Ltd.chibhizimisi chinotarisana mukugadzira epurasitiki kavha michini. Kambani yedu yakavambwa muna 2002 uye iri muRuian City, Zhejiang Province, pamhenderekedzo yeEast China Gungwa. Isu takasimbisa hofisi muShanghai muna 2017. Iyo kambani inovhara nzvimbo inopfuura 3,000 mativi emamirimita. Kune vashandi vanopfuura zana uye vanopfuura gumi mahunyanzvi. Tine simba rakasimba rehunyanzvi, zvigadzirwa zvakagadziriswa zvekugadzirisa, nzira dzakaperera dzekuyedza, uye muchina wekuridza firimu. Zvigadzirwa zvakadai zvine hunhu hwekudzora kwekuchengetedza chiyero, nguva yekushandisa yakareba, kushanda kwakanyanya, ruzha rwakaderera, nezvimwe, uye nesainzi yemhando manejimendi uye sevhisi yakavimbwa nevatengi.
Huru zvigadzirwa zveShanghai Duxia Indasitiri uye Trade Co., Ltd.: firimu ichivhuvhuta muchina, wekudhinda muchina, purasitiki bhegi kugadzira muchina, mapurasitiki marara muchina.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru
Firimu kuridza Muchina
Nzira yekusarudza yakakodzera firimu ichivhuvhuta muchina
Muchina wekufuridza firimu muchina unopisa nekunyungudusa zvidimbu zvepurasitiki zvobva zvafuridza kuita firimu. Kune michina yemafirimu yakafuridzwa inoshandisa PE, POF, PVC, PP semidziyo yekugadzira...... .
Iyo flexographic kudhinda uye gravure yekudhinda maitiro ane ayo ega mabhenefiti. Izvo zvakanakira flexographic kudhinda ndeiyi: inokodzera kupfupisa-kumhanyisa kudhinda kana kudhinda kwezvigadzirwa ......
epurasitiki mabhegi mhando
Mhando huru dzemapurasitiki (1) Yakakwira-yekumanikidza polyethylene bhegi repurasitiki. (2) Yakadzika-yekumanikidza polyethylene bhegi repurasitiki. (3) Polypropylene epurasitiki bhegi (4) PVC mapurasitiki mabhegi ...
Plastiki granulator sumo
Mutumbi mukuru wepurasitiki granulator ndeye extruder, iyo inoumbwa neiyo extrusion system, yekufambisa system uye yekupisa uye yekutonhodza system ...
Plastiki Kuisazve Machina
Nhare mbozha / WhatsApp: +8615221892684
Nhare mbozha / WhatsApp: +8613564398120
Facebook-f Twitter Google-uye-g Youtube Instagram
Siya ruzivo rwako, kutengesa kwedu kuchakubata iwe nekukurumidza sezvazvinogona!